तपाईंको ब्रान्डको आवाजको टोन कसरी विकास गर्ने (र कायम राख्ने) - Print Peppermint
अप्रिल 28, 2022 | ब्रान्डिङ, स्वतंत्र, स्वरोजगार
आवाजको ब्रान्ड टोन स्थापना गर्नु कुनै पनि व्यवसाय मार्केटिङ रणनीतिको लागि महत्त्वपूर्ण छ। एक सुसंगत ब्रान्ड आवाज कायम राख्नाले तपाईंको श्रोताहरूलाई तपाईंको व्यवसायको बारेमा थप सञ्चार गर्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, यसले तिनीहरूलाई सजिलैसँग तपाइँको व्यवसायसँग सम्बन्धित बनाउँदछ, यसलाई सफल व्यवसाय निर्माणको लागि एक लाभदायक घटक बनाउँदछ। यहाँ कसरी आवाजको ब्रान्ड टोन विकास गर्ने र यसलाई कायम राख्ने बारे चरण-दर-चरण गाइड छ।
तपाईंको ब्रान्डको आवाजको टोन कसरी विकास गर्ने
आवाजको सही टोन फेला पार्न, तपाईंले पहिले आफ्ना श्रोताहरूलाई बुझ्नुपर्छ। तिनीहरू को हुन्, र तिनीहरूसम्म पुग्न तपाईंले कुन भाषा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? एकचोटि तपाईंले आफ्ना श्रोताहरू पहिचान गरेपछि, तपाईंको ब्रान्ड मानहरू पहिचान गर्नुहोस्, जसले तपाईंलाई सामग्री निर्माण र सञ्चारमा मार्गदर्शन गर्नेछ। यी तत्वहरू परिभाषित गरेर, तपाईंले आवाजको स्पष्ट टोन स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको व्यवसाय संचार सिर्जना गर्दा भर पर्न सक्छ। यहाँ आफ्नो ब्रान्डको आवाजको स्वर कसरी विकास गर्ने भन्ने बारे अन्तर्दृष्टिहरू छन्।
१. तपाईको श्रोतालाई बुझ्नुहोस्
धेरैजसो ग्राहकहरूले ब्रान्डसँग भावनात्मक सम्बन्ध विकास गर्छन् जसले उनीहरूलाई उनीहरूको हेरचाह गरिएको महसुस गराउँदछ। धेरै जसो अवस्थामा, ग्राहकहरूले महसुस गर्छन् कि अधिकांश व्यवसायहरूले उनीहरूलाई व्यक्तिको रूपमा व्यवहार गर्दैनन्। बरु, तिनीहरूले तिनीहरूलाई भीडमा अज्ञात व्यक्तित्वको रूपमा व्यवहार गर्छन्। त्यसोभए, जब उनीहरूलाई विचार गरिन्छ, तिनीहरू तपाइँको ब्रान्डमा जडान हुने सम्भावना हुन्छ।
आफ्ना दर्शकहरूलाई बुझ्न, तिनीहरू को हुन् भनेर अनुसन्धान गरेर सुरु गर्नुहोस्। तिनीहरूको पत्ता लगाउनुहोस्;
पेशा र तपाईले पहुँच गर्न सक्ने धेरै जानकारी
सामाजिक सञ्जाल एनालिटिक्स वा गुगल एनालिटिक्स प्रयोग गरेर आफ्नो दर्शकको जनसांख्यिकीय जानकारी जाँच गर्नुहोस्। तपाईंको दर्शकहरूको पोर्ट्रेट सिर्जना गर्न डेटा प्रयोग गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाइँका दर्शकहरू सधैं खरीददारहरू बनाइएका छैनन्। त्यसोभए, एक प्रभावकारी व्यक्तित्वले तपाइँलाई तपाइँको दर्शकहरु संग संचार गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
आफ्ना दर्शकहरूसँग राम्रोसँग सम्बन्ध राख्ने एउटा सजिलो तरिका उनीहरूको पुस्ता पहिचान गर्नु हो। प्रत्येक पुस्ताको अद्वितीय विशेषता र अनुभव हुन्छ। उदाहरणका लागि, बेबी बुमर्स प्रायः घरमा छन् र डिजिटल प्रविधिलाई अँगालेका छन्, जबकि जेन एक्स मुख्य रूपमा बाहिरी गतिविधिहरूबाट रोमाञ्चित छन्। अर्कोतर्फ, सहस्राब्दीहरू डिजिटल प्लेटफर्महरूमा सक्रिय छन् र Gen Z जस्तै समान मानहरू साझेदारी गर्छन्। तपाईंले आफ्ना दर्शकहरूलाई निम्नद्वारा बुझ्न सक्नुहुन्छ:
क) उनीहरूले पढेका कुराहरू पत्ता लगाउँदै
एकचोटि तपाईंले आफ्ना श्रोताहरू र तिनीहरूको व्यक्तित्व बुझ्नुभयो भने, अर्को चरण भनेको उनीहरूले के पढ्छन् भनेर पत्ता लगाउनु हो। तिनीहरूले नियमित रूपमा पढेका कुराहरूले प्रत्येक समूहको लागि उत्तम सञ्चार विधिमा प्रकाश पार्नेछ।
मिलेनियलहरू सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा बढी सक्रिय छन्, र तिनीहरू प्रायः आफ्नो इमेलहरू पढ्छन्। Gen Z ले सामाजिक सञ्जाल र इमेलको तुलनामा मोबाइल एपहरूलाई महत्त्व दिन्छ। त्यसैले, यद्यपि तिनीहरूले इन-स्टोर अनुभवहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन्, तिनीहरू प्रामाणिक र व्यक्तिगत ब्रान्ड अनुभवहरू चाहन्छन्। तिनीहरूलाई पुग्नको लागि सबैभन्दा सजिलो तरिका उनीहरूको मनपर्ने सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू मार्फत हो।
तिनीहरूले पढेका कुराहरू पत्ता लगाउँदा, तपाईंको लक्ष्य शीर्ष सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू फेला पार्नु हुनुपर्छ जहाँ तपाईंका लक्षित दर्शकहरूले तपाईंमा भएको उद्योगबारे छलफल गर्नुहुन्छ। ब्रान्ड निगरानी एक उपयोगी स्वचालित उपकरण हो जसले तपाईंलाई शीर्ष फोरमहरू फेला पार्न मद्दत गर्न सक्छ जसले तपाईंको ब्रान्ड र उद्योग समयबारे छलफल गर्छ।
याद गर्नुहोस्, तपाईंले सबै प्लेटफर्महरूको लागि एउटा सामाजिक सामग्री सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंले सोशल मिडियाको लागि सिर्जना गर्नुभएको प्रत्येक सामग्री प्लेटफर्मको लागि अनुकूल हुनुपर्छ र तपाईंको दर्शकहरूलाई संलग्न गर्नुपर्छ।
ख) तिनीहरू कसरी सम्बन्धित छन् भनेर पहिचान गर्दै
तपाईंका दर्शकहरूले कसरी सञ्चार गर्छन्? तपाइँका दर्शकहरूले के मन पराउँछन् भनेर हेर्नको लागि छलफल थ्रेडलाई पछ्याउनुहोस् र मन नपराउने, उनीहरूले छलफलमा प्रयोग गर्ने स्वर र उनीहरूको भाषा। जब तपाइँ तिनीहरूको टोन, संचार ढाँचा, र शारीरिक भाषा प्रतिबिम्बित गर्नुहुन्छ, तपाइँका लक्षित दर्शकहरूले आफ्नो सम्बन्धको भावना महसुस गर्न सक्छन्। यसले तपाईंको सामग्रीलाई थप सान्दर्भिक बनाउन र बिक्रीमा वृद्धि गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
उदाहरण को लागी, एक संकट को समयमा, तपाईं समानुभूति हुनु आवश्यक छ। समानुभूतिले तपाइँका दर्शकहरूलाई देखाउँदछ कि तपाइँ तिनीहरूलाई बुझ्नुहुन्छ र मद्दत गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसकारण, आफ्ना श्रोताहरूसँग तिनीहरूको स्तरमा बोल्न वा तिनीहरूको रुचिहरूमा संलग्न हुन नहिचकिचाउनुहोस्। तिनीहरूसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध बढाउन यो प्रभावकारी तरिका हुन सक्छ।
2. आफ्नो ब्रान्ड मानहरू रूपरेखा
के लेख्ने भन्ने निर्णय गर्नु अघि, तपाइँ तपाइँको संचार को प्राथमिक उद्देश्य बुझ्न आवश्यक छ, जुन तपाइँको कम्पनी को मूल मानहरु द्वारा संचालित छ। तपाईंका मूल मानहरूले तपाईंलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न आवश्यक पर्ने उत्तम भाषा पहिचान गर्न र तपाईंको ब्रान्ड वरपरको समुदायलाई आकार दिन मद्दत गर्दछ। यहाँ तपाइँको ब्रान्ड मान को रूपरेखा कसरी छ;
क) आफ्नो मूल मानहरू रूपरेखा
ग्राहकहरू आफूले विश्वास गरेको व्यवसायप्रति वफादार हुनेछन्। तपाइँको ग्राहकहरु संग विश्वास निर्माण गर्न पारदर्शिता आवश्यक छ र तपाइँको कम्पनी को मूल मानहरु लाई बुझेर निर्माण गर्न सकिन्छ। यहाँ प्रश्नहरू छन् जसले तपाईंलाई आफ्नो मूल मानहरू परिभाषित गर्न मद्दत गर्दछ:
तपाईंले त्यो व्यवसाय किन सुरु गर्नुभयो?
तपाईको ब्रान्ड अरु भन्दा कसरी फरक छ?
तपाईंको व्यवसाय केको लागि खडा हुन्छ?
के तपाइँ तपाइँको दर्शकहरु संग कुनै साझा मान छ?
ख) मिशन स्टेटमेन्ट लिएर आउनुहोस्
एकचोटि तपाईंले आफ्नो ब्रान्ड मानहरू पहिचान गरेपछि, तपाईंको दर्शकहरूको लागि ब्रान्ड मिशन कथन सिर्जना गर्नुहोस्। कथनले तपाइँको पाठकहरूलाई तपाइँ को हो, तपाइँ कसको ख्याल गर्नुहुन्छ, तपाइँको उद्देश्य के हो र तपाइँ तपाइँको लक्षित दर्शकहरूलाई कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउनुपर्दछ। तपाइँ तपाइँको व्यवसायले आफ्नो टोलीलाई अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्न के गर्छ थप्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंका कर्मचारीहरू र टोलीले यी मानहरूमा काम गर्नुपर्छ। एक मिशन कथनले तपाईंको ब्रान्डको संस्कृतिलाई आकार दिन मद्दत गर्दछ र तपाइँका दर्शकहरूलाई तपाइँको कम्पनीसँग सम्बन्धित हुन अनुमति दिन्छ, विशेष गरी यदि मानहरू साझेदारी गरिएको छ। यसले ब्रान्डको उद्देश्य, उद्देश्य, र कम्पनीले कसरी दर्शकहरूलाई मद्दत गर्ने योजना बनाएको छ भन्ने कुरा पनि सञ्चार गर्छ। तपाईंको व्यवसाय समयको साथ बढ्दै जाँदा, तपाईंले संगठनको लक्ष्यलाई पुन: परिभाषित गर्नको लागि मिशन स्टेटमेन्ट पुन: गर्न आवश्यक पर्दछ।
अन्तमा, तपाईंको ब्रान्ड संचार लक्ष्यहरू संक्षेप गर्न सन्देश वास्तुकला स्थापना गर्नुहोस्। सन्देश वास्तुकलाले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई सामग्रीका विभिन्न रूपहरूमा प्रभावकारी र निरन्तर रूपमा सञ्चार गर्न मद्दत गर्दछ।
3. तपाईंको सामग्री सिर्जना र संचार लेखा परीक्षा
ब्रान्ड टोन सिर्जना गर्नु अघि, अन्तिम चरण भनेको तपाइँको हालको सामग्री टुक्राहरूको अडिट गर्नु हो। तपाईंको ब्रान्ड अहिले कस्तो सुनिन्छ र तपाईं यसलाई कस्तो सुनाउन चाहनुहुन्छ? अडिट गर्दा, हालको टोन हो भने आफैलाई सोध्नुहोस्:
ब्रान्ड मानहरू मिल्छ
तपाईंको मिशन कथनमा उल्लिखित मानहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ
सन्देश वास्तुकलासँग मेल खान्छ
आवाजको सही टोन पहिचान गर्दा तपाईंले चार आयामहरू विचार गर्नुपर्छ। के तपाइँ टोन हुन चाहनुहुन्छ?
औपचारिक वा अनौपचारिक?
हास्यास्पद वा गम्भीर?
उत्साही वा तथ्यको कुरा?
आदरणीय वा अपमानजनक?
तपाईंको सबै सामग्री आवाजको स्वरसँग मेल खान्छ भनेर सुनिश्चित गर्न, भाडामा लिनुहोस् शीर्ष-निशान स्वतन्त्र लेखकहरू। तिनीहरूले तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई संलग्न गर्न प्रभावकारी रूपमा तपाईंको मनपर्ने टोनमा सञ्चार गर्न सक्छन्।
4. आवाजको टोन छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको ब्रान्डसँग प्रतिध्वनित हुन्छ
श्रोता अनुसन्धानबाट मानसम्म सबै जानकारी मिलाउनुहोस् र तपाईंको ब्रान्डको आवाजलाई परिभाषित गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। आवाजको स्वरले दुईवटा कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ- तपाई अहिले कस्तो सुनिन्छ र तपाई कस्तो आवाज सुनाउन चाहनुहुन्छ,
सर्वप्रथम, तपाईंले लक्ष्य राख्नुभएको आयाम छान्नुहोस्, यो अनौपचारिक, कुराकानीत्मक, वा मध्यम उत्साही होस्। त्यसपछि, थप विशिष्ट टोन विशेषताहरू छनौट गर्नुहोस्, जस्तै, चंचल वा व्यंग्यात्मक। विभिन्न आवाज विशेषताहरू मिलाउनुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको सन्देशमा लागू गर्नुहोस्।
एक सुसंगत ब्रान्ड आवाज कायम राख्न मद्दत गर्न सुझावहरू
ब्रान्ड स्थिरता कायम राख्नाले तपाईंको राजस्व बढाउन मद्दत गर्न सक्छ किनकि यसले व्यापार सम्बन्धहरूमा जडान बढाउँछ। जब तपाइँ एक सुसंगत ब्रान्ड आवाज कायम राख्नुहुन्छ, तपाइँ प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ र तपाइँको कम्पनीमा ग्राहकको विश्वास जगाउनुहुन्छ, उनीहरूको खरिद निर्णयलाई प्रभाव पार्दै। एकपटक तपाईंले माथिका चरणहरू प्रयोग गरेर आवाजको ब्रान्ड टोन पहिचान गरेपछि, तपाईंले यी सुझावहरू पछ्याएर यसलाई कायम राख्न सक्नुहुन्छ।
1. आफ्नो नतिजा परिभाषित गर्नुहोस्
यदि तपाईं आवाजको एक सुसंगत टोन कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो परिणाम बुझ्नुहोस्। तपाईं के प्राप्त गर्ने आशा गर्नुहुन्छ? याद गर्नुहोस् कि तपाईंको ब्रान्ड आवाज विभिन्न स्थानहरूमा काम गर्नको लागि तिनीहरूको स्थान, संस्कृति, र मानहरूमा निर्भर गर्दै गतिशील हुनुपर्छ।
त्यसोभए, जब तपाइँको मूल मानहरू अपरिवर्तित रहनु पर्छ, तपाइँको आवाज प्रत्येक लक्षित दर्शकहरू अनुरूप फरक हुनुपर्छ। तपाईंको आवाजको नयाँ टोनले तपाईंको लक्ष्य र दृष्टि पूरा गर्न मद्दत गर्छ, यसलाई निरन्तरता दिनुले तपाईंको ब्रान्डलाई मद्दत गर्नेछ।
2. तपाईंको ब्रान्ड मूल मानहरू प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्
तपाइँका ग्राहकहरूले तपाइँलाई कसरी बुझ्छन्, र तपाइँ कसरी उनीहरूले तपाइँलाई बुझ्न चाहानुहुन्छ? केही कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित छन्, अरूले खेलकुद र पर्यावरणवादमा। यसैले, पहिचान गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँका दर्शकहरूले तपाइँलाई कसरी बुझ्न चाहानुहुन्छ, र सन्देश ड्राफ्ट गर्नुहोस् जुन तपाइँ तपाइँको ब्रान्डलाई सम्भावित ग्राहकहरु मा पास गर्न चाहानुहुन्छ।
ग्राहकहरूले तपाइँ कसरी कुराकानी गर्नुहुन्छ केवल तपाइँको ब्रान्डको भावना प्राप्त गर्नुपर्दछ। संचारको प्रत्येक टुक्राले तपाइँको मूल मानहरूलाई रूपरेखा दिनुपर्छ र तपाइँका ग्राहकहरूको लागि समानान्तर अनुभव प्रदान गर्नुपर्छ।
3. एक शैली गाइड सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईंसँग तपाईंको ब्रान्डको आवाजको लागि चार्ट हुनुपर्छ। गाइड एक स्थिर छ कि तपाईंले सामग्री सिर्जना गर्नु अघि समीक्षा गर्नुपर्छ। गाइड समावेश हुनुपर्छ:
तपाईंको कम्पनीको ब्रान्डको आवाजको सारांश
ब्रान्ड व्यक्तित्व को विवरण
के लेख्ने र के नलेख्ने
प्लेटफर्म-विशिष्ट आवाज निर्देशनहरूको विस्तृत विच्छेद
सामग्री ढाँचा कसरी गर्ने
एक शैली गाइड स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्छ। प्रत्येक पटक तपाईंले सामग्री सिर्जना गर्दा, गाइडले प्लेटफर्मको ख्याल नगरी तपाईंको ब्रान्डको लागि एक सुसंगत सन्दर्भ कायम राख्न मद्दत गर्दछ। तपाईंसँग GatherContent जस्ता प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर विभिन्न सामाजिक मिडिया च्यानलहरूको लागि शैली गाइड हुन सक्छ। च्यानल-विशेष गाइड प्रयोग गरेर, तपाईंको टोलीले निर्देशनहरूलाई अझ राम्रोसँग लागू गर्न र आवाज प्रदान गर्न सक्छ-विभिन्न च्यानलहरूको लागि केन्द्रित प्रतिलिपि।
4. विभिन्न च्यानलहरूमा समान टोन प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको ब्रान्ड टोन र शैली गाइडको साथ आएपछि, तपाईं एकरूप हुन आवश्यक छ र विभिन्न च्यानलहरूमा एउटै टोन प्रयोग गर्न आवश्यक छ। तपाइँ तपाइँको श्रोताहरु लाई कुनै सन्देश पठाउँदा तपाइँ तपाइँको टोन लाई नजिकबाट निगरानी गर्नुहोस्।
यसबाहेक, प्रत्येक सन्देश तपाइँको ब्रान्ड व्यक्तित्व र मूल्य संग पङ्क्तिबद्ध हुनुपर्छ। जब तपाइँ टोनहरू बीच स्विच गर्नुहुन्छ, तपाइँ मिश्रित सन्देशहरू सिर्जना गर्नुहुनेछ जसले तपाइँको ब्रान्डलाई कमजोर पार्न सक्छ र ग्राहकहरूलाई भ्रमित गर्न सक्छ।
५. आफ्नो टोलीलाई जानकारीमा राख्नुहोस्
तपाईंको ब्रान्डलाई सफल बनाउन विभिन्न पक्षहरू मिलेर काम गर्छन्। त्यसोभए, सुसंगत हुनको लागि, तपाईंले तिनीहरूलाई समावेश गर्न आवश्यक छ र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सबै साझा लक्ष्य तिर काम गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंका ग्राहकहरूले तपाईंको ब्रान्डसँग विभिन्न तरिकामा अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्। उदाहरण को लागी, पहिलो अन्तरक्रिया आवाज मार्फत हुन सक्छ, तपाईका कर्मचारीहरु को एक वाहक संग। यसले तपाईंको कम्पनीका सबैका लागि ब्रान्डको आवाजको स्वर बुझ्न र यसलाई सही रूपमा सञ्चार गर्न आवश्यक छ भनी देखाउँछ।
ब्रान्ड सन्देश सबै मार्केटिङ सामग्री र विभिन्न उत्पादनहरूमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। अझ के छ, यो कसरी नेताहरू, कर्मचारीहरू, र अन्य सरोकारवालाहरूले कम्पनीको बारेमा बोल्छन् भन्ने कुरामा सम्मिलित हुनुपर्छ। जब सरोकारवालाहरूले आफ्नो व्यावसायिक पत्राचारमा आवाजको ब्रान्ड टोन संलग्न गर्छन्, यो प्रस्तुतीकरणसँग सम्बन्धित परिभाषित ट्रेडमार्क बन्छ।
6. लेखन शैली परिभाषित र टाँसिनुहोस्
तपाइँको लिखित संचारहरूमा सधैं एक सुसंगत लिखित शैली प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले शब्द लम्बाइ जस्तै विभिन्न तत्वहरू विचार गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, तपाईंले पंच प्रतिलिपिको लागि छोटो शब्दहरू वा परिष्कृत प्रतिलिपिको लागि लामो शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले टेम्पोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। विराम चिन्हले मानिसहरूले पढ्ने ताल र गतिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यसले तपाइँ पास गर्न चाहानु भएको टोन र मुडलाई पनि असर गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, छोटो वाक्यहरु उत्साहित, रोमाञ्चक सन्देशहरु को लागी राम्रो छ, जबकि लामो वाक्यहरु गम्भीर सन्देशहरु को लागी आदर्श हो।
तपाईंले विचार गर्नुपर्ने अर्को तत्व भनेको दृष्टिकोण हो। कुन परिप्रेक्ष्यले तपाईको ब्रान्डको व्यक्तित्वसँग राम्रोसँग प्रतिध्वनित गर्छ? तपाईंले प्रतिलिपिलाई व्यक्तिगत र थप सान्दर्भिक देखाउनको लागि पहिलो व्यक्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिलिपिलाई थप आकर्षक र सीधा बनाउनको लागि, तपाईंले दोस्रो व्यक्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Slang पनि एक आवश्यक तत्व हो। यो राम्रो काम गर्दछ यदि यो तपाइँको ब्रान्ड व्यक्तित्व संग पङ्क्तिबद्ध छ। Slang ले तपाइँको ब्रान्डलाई प्रचलित देखाउन सक्छ वा ब्रान्डलाई यसको लक्षित दर्शकहरूको नजिक तान्न सक्छ, र यसले तपाइँको सन्देशलाई भ्रमित वा अप्राकृतिक बनाउन सक्छ यदि यसले तपाइँको ब्रान्ड व्यक्तित्वको विरोध गर्दछ।
7. तपाईंले सञ्चार गर्दा मानवीकरण गर्नुहोस्
निस्सन्देह सोशल मिडियाले सम्भावित दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्न ब्रान्डहरूको लागि एक अद्वितीय अवसर प्रदान गर्दछ। जे होस्, आफ्नो मार्केटिङ लक्ष्यहरू पूरा गर्न, तपाईंले पहुँचयोग्य प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक अन्तरक्रियाले ब्रान्डको आवाजलाई मित्रवत र सहयोगी तरिकामा सञ्चार गर्नुपर्छ।
तसर्थ, सधैं समान ब्रान्ड भ्वाइस दिशानिर्देशहरू एकरूप रहनको लागि प्रयोग गर्ने लक्ष्य राख्नुहोस् ताकि ग्राहकहरूले प्रतिस्पर्धीहरू बाहेक तपाईंको ब्रान्डलाई सजिलैसँग बताउन सकून्। एउटा प्रमुख टचपोइन्ट भनेको तपाईका सन्देशहरूलाई मानवीकरण गर्नु र विभिन्न प्लेटफर्महरूमा तपाईका श्रोताहरूसँग जोडिन आफ्ना श्रोताहरूसँग समानुभूति दिनु हो। जब तपाइँका दर्शकहरूले तपाइँलाई ब्रान्डको सट्टा एक मानवको रूपमा देख्छन्, तपाइँ उनीहरूको विश्वास र वफादारी जित्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ तपाइँको ब्रान्ड प्रतियोगीहरु माझ बाहिर खडा गर्न र केहि को लागी यो ज्ञात बनाउन चाहानुहुन्छ। आवाजको ब्रान्ड टोन विकास गर्न र यसलाई कायम राख्नाले तपाइँका ग्राहकहरूलाई तपाइँले प्रत्येक पटक कुराकानी गर्दा तपाइँको ब्रान्डसँग सम्बन्धित बनाउँछ। जे होस्, यो प्राप्त गर्नको लागि, तपाईंले स्पष्ट र सुसंगत ब्रान्ड आवाज विकास गर्न आवश्यक छ जुन तपाईं के को लागि खडा हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ। माथिको हाम्रो गाईडले तपाईंलाई ब्रान्ड व्यक्तित्व विकास गर्न र तपाईंको ब्रान्ड जीवित र फस्टाउने सुनिश्चित गर्न स्थिरता कायम राख्न मार्गदर्शन गर्नेछ!
मुख्य बजार अधिकारी
जेड ब्लूम, मार्केटिङ निर्देशक सामग्री प्यानल, एक उत्सुक बिब्लियोफाइल हो जसले आफ्नो धेरै समय पुस्तक पसलहरूमा बिताउँछ, उत्सुकतापूर्वक अर्को बेस्टसेलर उपभोग गर्न खोज्दै।
← तस्बिरहरूलाई पाठ फाइलहरूमा रूपान्तरण गर्नका लागि शीर्ष ५ अनलाइन उपकरणहरू